कमिटीका साथीहरुको साथले एनआरएन अमेरिकामा दुबै कार्यकाल सुखद् रह्यो : डा केशव पौडेल – Everest Times News
न्युमेक्सिस्थित लबलेस मेडिकल सेन्टरको वरिष्ठ चिकित्सक एवं मेडिकल डाइरेक्टर डा केशव पौडेलले संस्थागत रुपमा एनआरएन अमेरिकाको चार वर्ष नेतृत्व पुरा गरेका छन् । डा पौडेल दुई वर्षको कार्यकाल रहेको एनआरएन अमेरिकामा दुई पटक अध्यक्ष भए । उनीसँग चार वर्षे कार्यकालको बारेमा एभरेस्ट टाइम्सले गरेको कुराकानीः
तपाईको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
हाम्रो कार्यकाल विभिन्न बाधा, व्यावधान र अड्चनकाबीच पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।
के के गर्नु भयो दुई कार्यकालमा ?
एनआरएन अमेरिका सुसुप्त अवस्थामा रहेको संस्थालाई हामीले संस्थागत अवस्थामा ल्याउन सफल भयौ । जनमानसमा एनआरएन के हो ? किन सदस्य बन्ने भन्ने बारेमा बुझाउने कोशिश गरियो । यसका साथै संस्थागत रुपमा पनि हाम्रो नेतृत्वले गरेका हरेक निर्णयहरु पारदर्शी र सम्पूर्ण सदस्यलाई तुरुन्तै थाहा पाउने गरी बैठकको माइन्युटहरु सम्प्रेषन गरेका छौ । संस्थालाई सबल बनाउन राम्रो वेभसाइड पनि निर्माण गरियो । यसको साथै अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरुमा च्याप्टर गठन गरियो । सदस्य बनाउने हकमा हामीले ५० वटै राज्यहरुमा सदस्यता विस्तार गर्न सफल भएका छौ । समुदायमा आइपरेका समस्याहरुलाई समाधानका लागि हामीले अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरुमा एनआरएनए हेल्प डेक्सको व्यवस्था ग¥यौ । त्यस्तै एनआरएनको पहलमा नेपाली भाषामा सवारी चालक अनुमति, नेपाली पाठयुपुस्तक र न्युयोर्कमा माउन्ट एभरेस्ट वे नामकरणमा पहल ग¥यौ । त्यस्तै अमेरिकाम विज्ञ सम्मेलन गर्नुको साथै टिपिएसका लागि विभिन्न संघसस्थाहरुसँग परामर्श गरिएका थियो । विदेशमा बस्ने नेपालीले नागरिकता पाउनु पर्छ भनेर नेपाल सरकारको विभिन्न निकायसँगै राज्यव्यवस्था समितिसग लबिङको काम गरियो । त्यस्तै युवाहरुलाई शैक्षिक क्षेत्रमा प्रोत्सहाण दिलाउन छात्रावृति दिँदै आइरहेका छौ । प्रवासको साथै मातृभूमि नेपालमा विपत्तिमा परेको बेला त्यहाँको नेपाली जनताको सेवामा हामीले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्न सफल भएका छौ । त्यस्तै नेपालको वातवारण संरक्षणका लागि प्रदुषण न्युनीकरणमा एनआरएनए अमेरिकाले नेसनल इन्भाइरोमेन्ट एकेडेमीको गुरुयोजना निर्माणका लागि १० हजार डलर आर्थिक सहयोग गरियो । यसको साथै अमेरिकाभर विभिन्न राज्यहरुमा सामुदायिक भवन बनाउन हामीले उत्प्रेरणा र सहयोग पनि ग¥यौ । त्यसमा एक लाख डलरभन्दा बढी त म आफैले सहयोग गरिसके भने अरु थुप्रै हाम्रा एनआरएनका साथीहरुले पनि उतिकै सहयोग गर्नु भएको छ ।
अमेरिका भरी नै सदस्य बनाउन सफल भयौ भन्नु हुन्छ तर अघिल्लो कार्यकालभन्दा यो पटक किन सदस्य संख्या घटेको हो ?
अघिल्लो पटक विभिन्न व्यक्तित्व र एनआरएन अभियन्ताहरुले एनआरएन सदस्यता वितरणमा त्रुटिपूर्ण भयो भनेर सुझाव र सल्लाहहरु दिनु भयो । त्यही सल्लाह र सुझावअनुसार एनआरएनए अमेरिकाको सनफ्रान्सीसकोमा भएको ७ औं साधारण सभाको निर्णय अनुसार मेम्बरसीप प्रक्रियामा सुधार गरी सरकारले जारी गरेको फोटो भएको परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि मेम्बरसीप प्रक्रिया अघिभन्दा कडा भएको थियो । एनआरएनएनमा एकथरी व्यक्तित्वहरु एनआरएनए अमेरिकाको सदस्यता बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर हिडनु भयो । जो व्यक्तिहरु सदस्यतामा त्रुटि भयो भनेर पनि भन्नु भएको थियो । त्यही व्यक्ति र उही समुहहरु संस्थागत रुपमा सदस्यता बहिष्कार गर्ने अभियानमा सक्रियता देखाउनु भयो । विरोध र मेम्बरसीप कडाईको बावजुद पनि स्वतस्फुर्त रुपमा सदस्यता बन्नु भनेको एनआरएन अमेरिकाको ठुलै सफलता हो ।
निर्वाचनको परिणामपछि मुद्दा हाल्ने प्रवृति बढ्न थालेको छ नि ?
नेपाली समाज अमेरिकामा कलिलो अवस्थामा रहेको देखियो । हामीले धेरै किसिमका अमेरिकन संस्कारहरु सिकेका छैनौ । सभ्य समाजमा निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएपछि चुनावी परिणामलाई सहज रुपमा स्वीकार्नु पर्छ । हाम्रो नेपाली समाज अझै सिक्ने अवस्थामै छ र सिक्ने प्रक्रियामा छ । प्रजातन्त्रिक अभ्यासको मर्म बुझ्ने र आत्मसात गर्न समय लाग्न सक्छ । अब चुनावी प्रक्रियालाई मान्यता दिँदै प्रजातन्त्रिक प्रक्रियामा जान्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु । सभ्य समाजको असल संस्कारहरु सिक्दै गएपछि चाँडै नै यस्ता गलत कुराहरु हराउँदै जानेछ । यो कुनै व्यक्तिको कमजोरी नभई नेपाली समाजको कमजोरी हो । यो सुधारन्मुख छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा हामीले लिनु पर्छ ।
चार वर्षेको कार्यकालको अनुभव सुखद रह्यो कि दुखद ?
यो चार वर्षको दुई कार्यकाल पुरै सुखद अनुभव भयो । यस्तो अनुभव हुन्छ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो । म शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र आध्यत्मिक रुपमा पूर्ण रुपमा तयार थिए । कुनै पनि दिन असजिलाहरुलाई कुनै हिच्किचावट विना सामना गर्दै जान्छु भन्ने दृढ विश्वासका साथ काम गरे । यसमा मलाई दुबै कार्यकालमा कमिटिभित्रका साथीहरु सहयोग र साथ रहयो । कमिटिभित्र मात्र होइन बाहिरबाट पनि मलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ ।
मैले एनआरएन अमेरिकामा पाएको यो अनुभवलाई लिएर अब एनआरएनए अभियानलाई सक्रिय रुपमा सम्मिलित भई नेपाल र नेपालीका लागि सधैं काम गरिरहने योजना छ । भविष्यमा पनि तपाईहरुको सक्रिय साथ र सहयोगको अपेक्षा लिएका छु ।
तपाईको कार्यकालको अन्तिम तथा ८ औं साधारण सभाको बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
यो एनआरएन अमेरिकाको इतिहासमा महत्वपूर्ण साधारण सभा हुनेछ । निवर्तमान हुन लागेका र नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु एकै मञ्चमा बसेर एनआरएन अमेरिकाका भविष्यबारे छलफलमा जाने निर्णयमा जाने यो साधारण सभा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यसले एनआरएनको कार्यदिशासमेत निर्धारण गर्नेछ । यो ऐतिहासिक साधारण सभामा उपस्थित भई आफ्ना प्रस्तावहरु, सुझाव तथा सल्लाहहरु राख्नक सम्पूर्ण एनआरएन अभियन्ता ज्युहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।